आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अनुदानलक्षित छैन : अर्थमन्त्री शर्मा « News24 : Premium News Channel
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अनुदानलक्षित नभएको बताएका छन् । बुधबार राष्ट्रिय सभामा सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमाथिको सामान्य छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चुनावलाई लक्षित गरेर नल्याइएको दोहो¥याउँदै बजेटमा पैसा बाँड्ने कुरा कतै नगरेको जिकिर गरे । मन्त्री शर्माले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसदहरुप्रति लक्षित गर्दै विगतमा अनुदान बाँडिएको अभ्यासको झझल्को अहिले पनि आइरहेको व्यंग्य गरे । उनले प्रतिपक्ष दलहरुलाई बजेट अनुदान नदिनेमा ढुक्क हुन आग्रह गरे ।
अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘बजेटमा चुनावलाई ध्यानमा राखेर पैसा बाँड्ने कार्यक्रम मात्रै बनाइयो भन्ने छ तर यहाँ कतै पैसा बाँड्ने काम छैन । अनुदान भन्ने कतै पनि छैन । अनुदान भनेर हिजो बाँडिएको अभ्यासको स्मरण होला । तर यसमा बिल्कुल अनुदान छैन । प्रोत्साहन छ । किसानले दुध दुह्यो, त्यसले प्रोत्साहन पायो । प्रोत्साहन छ, अनुदान छैन । त्यसकारण यहाँ कतै बाँडिदैन । दुध दुहेको बेला सरकारले भाट कसलाई दियो सोध्दैन, दुध दुह्यो कि दुहेन यति सोध्छ, त्यसकारण यसमा ढुक्क हुन आग्रह गर्दछु ।’
मन्त्री शर्माले प्रतिपक्षले इण्डक्शन चुल्हो बाँडेर भोट साट्न खोजेको आरोप लगाइएको भन्दै प्रतिपक्षलाई पनि साथमा लिएर चुल्हो बाँड्ने कार्यक्रम बनाउने बताए । उनले इण्डक्शन चुल्हो निर्वाचनसँग केन्द्रित नभएको भन्दै चुल्होमा राजनीति नगरेको स्पष्ट पारे । मन्त्री शर्माले नेपालको विद्युतीय संयन्त्रले २५ प्रतिशत मात्रै विद्युतीय उपकरणको प्रयोग धान्न सक्ने भएकोले त्यसै अनुसारका संरचनामा बजेटले जोड दिएको बताए ।
उनले इन्डक्शन चुल्हो बाँडेर भोट साट्ने कुरा सरकारको नरहेको बताए । मन्त्री शर्माले भने, ‘विद्युतको कुरा, विद्युतीय चुलोको कुरा गर्दा इण्डक्शन चुल्हो बाँड्न लाग्यो, निर्वाचनमा जान थाल्यो, निर्वाचनको बारेमा सोचेको होइन । इण्डक्शन चुलो निर्वाचनसँग सम्बन्धित छैन । यो बाँड्नेमा प्रतिपक्ष दललाई पनि सँगै लगेर बाँड्ने कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ । सँगै लैजाउँला । चिन्ता गर्नुपर्दैन । यो कुनै राजनीति गरेको होइन । यो देशको आजको आवश्यक्त हो । तर आवश्यक्ता आज नै सबै पूर्ति हुँदैन ।’
उनले थपे, ‘आज कति धान्छ तपाईको संयन्त्रले भनेर विद्युत प्राधिकरणको एमडीलाई बोलाएर सोधेँ । उहाँले २५ प्रतिशत मात्रै भन्नुहयो । यो वर्ष २५ प्रतिशत मात्रै दिन सकिने संरचनाको लागि थप बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । संरचना वृद्धि गर्दै जाँदा त्यसलाई सय प्रतिशत पु¥याउने कुरा हो । त्यसलाई सिंह दरबारबाट शुरु गर्ने भनिएको छ, बिस्तारै जनतामा जान्छ । योसँग भोट साट्ने कुरा बिल्कुल छैन । ढुक्क हुनुभए हुन्छ ।’
त्यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले संरचनात्मक परिवर्तन प्रणालीका आधारमा सबै वर्ग र समुदायलाई समेटेर संविधानले प्रदान गरेका अधिकारहरुलाई कार्यान्वयन गर्न नयाँ सोचमा जानुपर्ने बताए । उनले पुरानो संसदीय मान्यताका आधारमा बिरोधका लागि बिरोध गर्ने मान्यताबाट मुक्त हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
मन्त्री शर्माले देश ठूलो शंकटमा गइरहेको कुरा उठिरहेको भन्दै देशको आर्थिक शंकटलाई सरकारले हालै प्रस्तुत गरेको बजेट नै समाधानको अन्तिम विकल्प रहेको बताए । उनले सरकारले देशभरबाट जनताले दिएका गुनासाहरुका आधारमा नै बजेट निर्माण गरेको बताए ।
उनले भने, ‘हाम्रो संरचनात्मक परिवर्तन प्रणालीका आधारमा सबै उत्पीडित वर्ग, जाती, लिङ्ग र समुदाय, सबै भूगोललाई संविधानले दिएका अधिकारहरु संविधानले प्रदान गरेका अधिकारहरुलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि एउटा नयाँ सोचमा नयाँ मान्यतामा हामी जान जरुरी छ । पुरानो संसदीय मान्यताका आधारमा बिरोधका लागि बिरोध, सहीको पनि बिरोध, गलतको पनि समर्थन गर्ने मान्यताबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ । यो समावेशीताको मान्यताबाट गलत पनि हुनसक्छ । हुनसक्छ, बजेटमा त्रुटीहरु पक्कैपनि होलान् । म शतप्रतिशत सबैकुरा सही छ भनेर भन्दिन । होला त्रुटी ।’
उनले फेरि भने, ‘तर के असल पक्ष छैन । यो अहिलेको देशको आवश्यक्ता हो कि होइन ? आज देशलाई आवश्यक्ता हो कि होइन ? आज एकातिरबाट मैले सुनिरहेका छु, देश ठूलो शंकटमा छ । यो शंकटलाई यसले समाधान गर्दैन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ, यदी शंकटमा छ भनेपनि यसको समाधान यही हो । छैन भनेपनि यसको समाधान यही हो । यो भन्दा अर्को समाधान छैन । सरकारले आजको परिस्थितिलाई विचार गरेर, प्रधानमन्त्री, सत्तारुढ दलका नेताहरु, देशभरबाट टोलफ्री नम्बरमा यो बजेट बनाएको हो । मैले बनाएको होइन, यो बजेट तिनै गरीब उत्पीडित जनता यो देशका अर्थशास्त्री, बुद्धिजीवि, आम राजनीतिक पार्टीहरुको मार्गनिर्देशनलाई मैले प्रस्तुत गरिदिएको मात्रै हो ।’
अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट जनताले प्रस्टरुपमा बुझिसेकेको बताए । उनले जनताले बजेट कृषिमा जाने रहेछ भनेर कृषिमा लाग्नुपर्ने धारणा राखिरहेको बताए ।